Izimboni zaseTurkey I-5 -10 Izigidi Ze-Euro Zithunyelwa Ngenkathi Izithenda zeBillion Euro Zesistimu Ziya Kubantu Bangaphandle | RayHaber | Isitimela | Umgwaqo omkhulu | ikhebula imoto
IkhayaTURKEYIsifunda sase-Central AnatoliaI-06 AnkaraIzimboni zaseTurkey I-5-10 Izigidi Zamarandi Zithunyelwa Ngenkathi Amathenda weBillion Euros System Railer Aya Kwabangaphandle
04 / 11 / 2019 Levent Elmastaş I-06 Ankara, I-16 Bursa, 34 Istanbul, Isifunda sase-Central Anatolia, sesitimela, Izimoto Zesitimela, JIKELELE, KENTİÇİ Rail Systems, HEADLINE, Isifunda saseMarmara, Metro, TURKEY, tram 0
Ngenkathi imboni yaseTurkey ijikeleza ukuthunyelwa kwezigidi zama-euro, amathenda wohlelo lwama-euro ayizigidi eziyinkulungwane ezweni lethu aya kubantu bakwamanye amazwe
Isazi sezimboni zaseTurkey i-5-10 euros ezizothumela kwamanye amazwe, ngizokwakha amathuba okuqashwa kuleliya lizwe ngebhidi lokuya kuma-euro ayizigidi eziyinkulungwane ezweni liya kubantu bakwamanye amazwe.
AmaShayina anqoba ithenda yemoto yezitimela engaphansi kwe2009 ebanjelwe e-İzmir e-32 ngaphandle kokufaka imali yasekhaya nangenxa yentengo yama-33 Euro ama-Euro.
Ithenda yangaphansi ye-2012 eyabanjelwa e-Ankara e324 yanqotshwa amaShayina ngomnikelo wasekhaya owenziwa nge-51% kanye nama-391 dollar amadola.
AmaCzech awine ithenda le-2012 tram eligcinwe eKonya e-60 ngaphandle kokuthola imali yasekhaya nangenxa yentengo yama-104 Euro ama-Euro.
IHyundai Eurotem iwine ithenda yemoto ye-2015 ebanjelwe e-Istanbul e-300 kuma-50 ezigidi eziyikhulu zama-280 euros ngesidingo seminikelo yasekhaya ye-200.
AmaShayina anqoba ithenda yemoto yezitimela engaphansi kwe2015 ebibanjelwe e-İzmir e-85 ngaphandle kokufaka imali yasendlini ngentengo yezigidi ezingama-71 zama-400 eyizinkulungwane ezingama-Euro.
Abantu baseChinese bawine ithenda yama-subway i-2018 ebanjelwe e-Istanbul e-272 ngenani le-50 billion 2 million TL ngesimo se-448 esivakalayo sekhaya.
I-Metro ithenda yezigidi zama-1 zezigidi zama-196 zama-499 eziyinkulungwane zama-923 Euro, okuhloswe ukuthi ibanjelwe eKonya manje, iphinde yanikezwa abantu baseChina. Kungani eze nemali yaseChina futhi efuna ukukhiqiza zonke izimoto ezingaphansi komhlaba ngengqalasizinda yakhe kwasayinwa amasayino. Ngethemba ukuthi bazokwengeza isidingo se-80% sengezo lwasekhaya.
Ngaphezu kwalokho, ethenda yezimoto zikaMasipala we172 ezenzelwe i-Istanbul Airport, izimoto kufanele zilethwe ezinyangeni ze-8. Inani lethenda cishe ama-euro ayizigidi ezingama-300. Ngakho ngidinga imoto ephuthumayo futhi kumuntu ongaziwa mhlawumbe naye uya eChina. Kuyadingeka ukubuza ukuthi kungani izimboni zaseTurkey zingahlelanga zonke lezi zinto ngenkathi isikhumulo sezindiza sakhiwa eminyakeni edlule.
Ngaphezu kwalokho, imboni yaseTurkey ikwazi ukwakha zonke izingqalasizinda kanye nezimoto zawo wonke amajantshi wesitimela.
Asizange sihlele i-11 ezinhlelweni zokuthuthuka kuze kube i-2023 izoba yi-80% umnikelo osekhaya kanye nohlobo lomhlaba? Asishongo yini ukuthi kumaSu we-2023 Industrial Strategies, izimpahla ezifuywayo zizonikezwa kuqala futhi izimpahla ezingeniswe ngaphakathi zizothathelwa indawo yizindawo zabomdabu?
Ithenda le-1 billion ye-Euro ezobanjwa maduze nje kanti ithenda yemoto ka-300 yezigidi zamarandi ezobanjelwa e-Istanbul izoba yihloni kwi-National Turkish Industry kanye ne-Industrialists uma inikezwe umShayina noma owakwamanye amazwe. Okulandelayo, kunamathenda kamasipala asakhiwa kanye namaphrojekthi e-Izmir, Ankara, Istanbul nase Mersin. Inani lentengo lama-euro we-5 billion.
Ngicabanga ukuqeda amaShayina nabakwamanye amazwe, i-11. Yinye kuphela indlela yokufeza izinqumo zohlelo lwasekhaya nezesitimela ezithathwe kuhlelo lwentuthuko. Wabuye ukutshala Turkey waxhumana ekukhiqizeni TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ, DURMAZLAR, BOZANKA ukuba, ASELSAN, njengoba TÜDEMSAŞ futhi ASAS lonke wesitimela abakhiqizi uhlelo ndawonye ngaphansi kophahla Consortium lonke uhlelo lwezitimela usebenza e-Turkey njengoba Y'all zendawo nezikazwelonke wethu mina Ngidinga igunya likahulumeni kanye nesikhuthazo sikahulumeni ukusho ukuthi ngizokuxhasa.
Ngoba zonke izinkampani emhlabeni ziba namandla ngokuhlanganisa ukuncintisana. I-CRRC yaseChina yathuthuka yaba yisakhiwo esiqinile ngokuhlanganiswa kwenkampani ye-10, ekhiqiza izinhlelo zesitimela. Inkampani yaseJalimane i-Motorola nenkampani yaseFrance i-Alstom yaqhubeka nokuhlangana ukuncintisana ne-CRRC yaseChina.
Ngokufanayo, uma singeke sakhe umfelandawonye oqinile ezweni lethu, lezi zinkampani ezikhiqiza zonke izinhlobo zezitimela zezitimela futhi zitshala imali enkulu ezweni lethu kungekudala zizokhiya iminyango yazo ngazinye futhi cishe abasebenzi be-15.000 abasebenza kulezi fektri bangasebenzi.
Lezi zinkampani zithwele kanzima ukuzuza ama-euro ayizigidi ezingama-5-10 million e-Romania, ePoland, Thailand nase11. Uma singahambisani nezinqumo ezithathiwe ezinhlelweni zentuthuko futhi silethe amathenda ezitriliyoni zamarandi ezweni lethu kubantu bakwamanye amazwe, kuzodabukisa imboni yethu yezwe lonke.
I-100 Billion Euro Indawo Yokusebenza Ngethungatha